Dawlada Maraykaku waxay 'joogitaan dibloomaasiyadeed oo joogta ah' kuyeelanaysaa Soomaaliya
Associated Press [read in English]
Dawlada Maraykanku waxay dib usoo celinaysaa "joogitaankeeda dimlomaasiyadeed ee rasmiga ah" oo ay kulahayd wadanka Soomaaliya markii ugu horaysay muddo 27 sano ah.
Waaxda Dawlada ayaa Talaadadii sheegtay "talaabadaan taariikhiga ah waxay cadayn utahay hormarka Soomaaliya samaysay sanadihii dhawaa waana talaabo kale oo looqaaday dhanka hagaajinta dhaqdhaqaaqa diblomaasiyadeed ee Maraykanku kuleeyahay Mogadishu."
Dawlada Maraykanku waxay albaabada ulaabtay safaaradii ay kulahayd Soomaaliya bishii Janaayo 1991 kadib markii dalku galay dagaal sokeeye, ayadoo safiirkeena iyo shaqaalaha kalaba lagusoo qaaday dayuurad milatari.
Dawlada Maraykanku waxay si rasmi ah u aqoonsatay dawlada federaalka cusub ee Soomaaliya sanadkii 2013 laakiin waxay hawlaheeda diblomaasiyadeed kamaamulaysay caasimada wadanka Sooaaliya dariska la ah ee Kenya.
Xoghayihii Hore ee Arimaha Dibada Maraykanka John Kerry markuu uu booqasho lama filaan ah kutagay sanadkii 2015 wadanka Soomaaliya ayaa sheegay in Maraykanku bilaabi doono shaqada dib usoo celinta joogitaankiisa diblomaasiyadeed ee dalka Soomaaliya.
Safiirka cusub Donald Yamamoto ayaa bilaabay shaqada safaarada Maraykanka bishii lasoo dhaafay.
by Michael Olson, MPR News 12/6/2018 8:11:21 PM